Annaga nagu saabsan - QALABKA MAKIINADDA BAASILE
Hordhaca Kooban ee Shirkadda
Bulshada casriga ah, alaabooyin kala duwan oo kala duwan ayaa meel walba laga shaqaaleysiiyay noocyo kala duwan oo kala duwan, sida baabuurta, warshadaha, iyo alaabta guriga, iwm. si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood, dadku waxay i waydiin karaan waa maxay alaabta aad samayso ama meesha ma arki karaa alaabtaada nolosheenna?Si fudud marka loo hadlo, codsiga baabuurtu maaha meel aan la aqoon.Waxaan wadnaa baabuurta maalin kasta, laakiin waxa aynaan garanayn ayaa ah in ay jiraan kumanaan qaybood oo baabuur ah oo ay samayn karaan CNC Machining iyo Sheet Metal, sida freeemka baabuurta, qaybo gaar ah oo loo qaabeeyey iyo xitaa biro.Taasi waa waxa aan samaynayno.
Basile Machine Tool (Dalian) Co., Ltd. (BMT) waxaa la aasaasay 2010 iyadoo leh aragti cad: Si loogu adeego Qaybaha Mashiinnada Saxda ah ee CNC, Biraha Sheet iyo Qaybaha Shaabadda.Tan iyo markaas, BMT waxay soo saartay qaybo badan oo saxan oo saxan oo loogu talagalay warshado badan, oo ay ku jiraan Automotive, Processing Food, Industrial, Petroleum, Energy, Aviation, Aerospace iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo qaybo kale ah oo leh dulqaad aad u adag iyo saxsanaan sare.Iyada oo la raacayo hagidda iyo kormeerka Khubarada Jabbaan iyo Injineer Sare ee Talyaani, waxaan leenahay iimaan aan dhammaad lahayn si aan u bixinno Alaabooyinka Mashiinnada CNC ee Tayada Sarreysa iyo Qaybaha Sheet & Biraha Shaabadda.
BMT waxay u jirtaa ganacsi hal ujeedo ah si ay u xalliso dhibaatooyinka soo saarista degdega ah!Soo saarista Xalka BMT waaQaybaha Mashiinka ee CNC, iyo Qaybaha Sheet Metal & Stamping.Si wada jir ah ayaanu u dhex mari doonaa badda Nakhshad, Wakhtiga Hogaaminta iyo doorsoomayaasha miisaaniyada waxaanan ka dhigi doonaa habka go'aankaaga mid degdeg ah.Laakiin sidee baan u samaynaa?Jawaabtu waa sahlan tahay ~RUNTII WAANU DARYEELO.
Sanadihii la soo dhaafay, BMT waxay noqotay khabiir sax ah oo si fiican loo tixgeliyo oo leh in ka badan 40 nooc oo Mashiinnada CNC ah, sida CNC Lathes, Xarunta Machining CNC, Mashiinka Lathe, WEDM, Milling iyo Drilling Machine, Mashiinka Goynta, Mashiinka Welding Panasonic, iwm. .
Si loo noolaado ilaa rajada kor u kaca, BMT waxay la shaqaynaysay hal Shirkad Talyaani ah ilaa 2016, naqshadaynta iyo horumarinta Qalabka Qalabka Mashiinka (Utility Model Patent No.: ZL 2019 2042 3661.3).
Mashruuc kasta oo guulaysta, sumcaddeenu way korodhay, taasoo noo suurtagelinaysa inaan si tartiib tartiib ah u ballaarino saldhigga macaamiisha juqraafi ahaan iyo marka laga eego dhinaca warshadaha.
Maanta, Qaybaha Mashiinnada ee BMT waxaa laga heli karaa adduunka oo dhan, iyagoo u qabta dhammaan noocyada shaqada mashiinnada qaar ka mid ah shirkadaha adduunka ugu horreeya, sida Toyota, BMW, Toshiba, Mori Seiki, iwm.
Waa maxay sababta ay ula shuraakoobeen BMT?
Maxay BMT samayn kartaa?BMT waxay u jirtaa inay kaa qaado xanuunkaaga.Waxaan ku jirnaa ganacsi si aan u noqono shuraakadaada marxalad kasta oo horumarinta alaabta iyo wax soo saarka gaarka ah.Kaliya waxaad u baahan tahay inaad nagu kalsoonaato! Waanu u fududahay in aanu la shaqayno, dhaqso wax looga jawaabo oo aanu ku horumarno taabashadayada, waxaananu ku hagi doonaa kooxdaada horumarineed ee fowdada si ay qaybahaaga tayada leh u soo saaraan si dhakhso ah iyo qiimaha ugu fiican.
Waa maxay sababta aad ula wadaagto BMT?Sababtoo ah Dadkeenu waxay Sameeyaan Farqiga.Waxaan isku darnaa tignoolajiyada ugu dambeeyay iyo adeegga gaarka ah ee khubarada xamaasada leh si aan u daboolno baahiyahaaga qofna ma awoodo.
Markaan sii wadno wanaagayada la xaqiijiyay, waxaan rajeyneynaa inaan abuurno iskaashi faa'iido wadaag ah oo waqti dheer leh oo lala yeesho macaamiil badan oo leh dabeecadeena xirfadeed, hogaaminta farsamada iyo adeegyada tayada leh.Waxaan kalsooni ku qabnaa in BMT ay noqon doonto doorashadaada ugu fiican haddii aad raadinayso soo saaraha saxda ah ee farsamaynta biraha oo leh adeegyo tayo leh oo hogaaminaya fasalka.
Waxaan kalsooni ku qabnaa in BMT ay noqon doonto doorashadaada ugu fiican haddii aad raadinayso soo saaraha saxda ah ee farsamaynta biraha oo leh adeegyo tayo leh oo hogaaminaya fasalka.
Mashiinka gaarka ah, Qaybaha Mashiinada Saxda ah, Qaybaha birta xaashida-dhamaadka-sare ee la habeeyey, Makiinada, Cnc Titanium Machining, Machining sax ah,